afnokura.com » एनअारएन जापानले सदस्यता कार्ड कहिलेसम्म बाँड्ला ?
त्यतिबेला एनआरएन जापानको चुनावको लागि गरमागरम बहस भएको थियो अहिलेको वर्तमान कार्यसमितिको लागि । चुनावी मैदानमा उत्रेका उम्मेदवारहरु आफ्नै पल्लाभरी गर्न व्यस्त थिए । हरेकले उम्मेदवारी दर्ता गराएर रातारात आ–आफ्नै गच्छे अनुसारको घोषणा पत्र निर्माण गरेर भविष्यको योजनाहरु सार्वजनिक गरिरहेका थिए । पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो कुरा जापानका नेपाली माझ राखेको अझै मानस्पटलमा ताजै छ । त्यही बेला पहिलोपटक मैले पनि एनआरएन जापानको चुनावमा मताधिकारको लागि १००० येन संस्थाको खातामा दाखिला गराई इन्टरनेटबाट फारम भरें । आफूलाई इच्छा र भरोसा लागेको उम्मेदवारलाई मत पनि दिएँ । आफूले मत दिएका मध्ये कतिले विजय हासिल गरे या त गरेन त्यो वेग्लै कुरा हो । अनि विजय हासिल गरेका अहिलेका कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुले आफूले घोषणा पत्रमा लेखे अनुसार काम गरिरहेका छन् या त छैनन् त्यो पनि जापानका नेपालीले मूल्यांकन गरेकै होलान । तर आज एकजना साथीले सोध्नु भएको एउटा कुराले म अवाक भएँ, नाजवाफ भएँ ।
कुरो त्यही चुनावकै प्रसंगसँग जोडिएको छ । एनआरएन जापानले मतदानको लागि १००० येन सदस्यता शुल्क दाखिला गरेपछि इन्टरनेटमा फोटो र पैसा दाखिला गरेको रसीदको फोटो राखेर फारम भर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । एकजना साथी उहाँको नाम नारायण गुरुङ (उहाँ एनआरएनलाई पनि माया गर्नुहुन्छ, नेपालीहरु एकजुट भएको मन पराउनुहुन्छ, समाजसेवामा समर्पित हुनुहुन्छ र समाजसेवा गर्नेहरुलाई सम्मान गर्नुहुन्छ) उहाँले पनि फारम भर्ने इच्छा राख्नुभयो । आफूलाई इन्टरनेट सम्बन्धी त्यति ज्ञान नभएको र मसँग चिनजान भएको नाताले उहाँले मलाई पैसा दाखिला गराई फारम भरिदिन अनुरोध गर्नुभयो । म आफूले पनि फारम भरेको र उहाँको अनुरोधलाई पनि सहर्ष स्वीकार गरी हुन्छ भनेर उहाँको फोटो र पैसा लिएर फारम भरिदिएँ । फारम भरेपछि उहाँको मतदाता नामावलीमा नाम आएको छ कि छैन भनेर चेक पनि गरेर उहाँको नाम भएको पेज फोटो खिचेर पठाईदिएँ ।
फारम भर्दा सक्सेसफुल्ली फारम भरेको भन्ने म्यासेज आएको थियो क्यार त्यसको पनि स्क्रीन सट लिएर उहाँलाई बुझाएको थिएँ । चुनावको दिनमा मतदान गर्न उहाँ जानुभयो कि भएन मलाई थाहै भएन । आज फोनमा कुरा गर्दा उहाँ जानु भएनछ । उहाँले मलाई फोन गरेर सोध्नुभयो । सर, म त्यतिबेला मतदान गर्न पनि गईन, के को आधारमा मतदात गर्न जाने त्यतिबेला पनि थाहा भएन । र हालसम्म मैले त्यतिबेला बनेको सदस्यको केही पनि प्राप्त गरेको छैन । सदस्य भनेपछि कार्डसार्ड केही बन्नुपर्ने हो के भयो होला ? तपाइँले त्यतिबेला इन्टरनेटमा भरिदिनुभएको तपाइँलाइ केही थाहा होला भनेर यसो बुझ्नलाई सम्पर्क गरेको । उहाँलाई मैले केही उत्तर दिनै सकिन । के भनेर उत्तर दिएको भए हुन्थ्यो होला मलाई केही थाहै भएन । केही समय अगाडि पत्रकार भेटघाटमा छिटै सदस्यता कार्ड बाँडिनेछ भन्नुभएको जस्तो लागेको थियो । सायद साथीहरुले काम गर्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने जवाफ दिएँ । उहाँले थप्नुभयो–अब त अर्को चुनाव पनि आउन लाग्यो त सर ? मैले उहाँलाई भनें, तपाइँले तपाइँको र मेडमको समेत फारम भर्न लगाउनु भएकै हो सर । त्यही अनुसार मैले फारम भरेकै हो । मत राख्न जानुभयो होला भन्ने लागेको थियो जानुभएनछ । सिनओकुवो आउनुस् म एनआरएनको अफिस देखाइदिन्छु अथवा अध्यक्ष लगायतको सम्पर्क दिन्छु सम्पर्क गरेर सोध्नुहोला सदस्यता कार्ड बन्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो होला भनेर । मलाई पनि त्यति राम्रोसँग काम कहाँ पुगेको छ थाहा भएन भनेर उहाँलाई उत्तर दिएँ ।
अनि धेरैपटक यो सदस्यता कार्डको बारेमा ठाउँठाउँमा चलिरहेको बहसको स्मरण गरें । आफूलाई पनि लागेको कुरा सदस्यता कार्ड बनाउन कति समय लाग्ने हो र कहिलेसम्म सदस्यता कार्ड पाउने हुन सदस्यहरुले एनआरएन जापानले स्पष्ट भनिदिनु पर्यो अन्यथा म जस्तोले स्पष्टिकरण दिइरहनु पर्ने अवस्था आएको खण्डमा के भनेर उत्तर दिंदा राम्रो होला ? सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।***